July Dream: October 2009
ငယ်ဘ၀ကို သတိရစေတဲ့ ဟင်းကို ဂိုဏ်းတူရန်သူ မဖြစ်လိုက်ရရှာတဲ့ မေကဆုန်က ရေးခိုင်းထားတာ ကြာလွန်းလှပါပြီ။ ကြာတာမှ ရေးခိုင်းတဲ့သူ မေ့လောက်အောင် ကြာတာပါ။ ခက်ဆစ်ဖွင့်ဖို့ လိုနေတာလေးတွေ ရှိလို့ ခက်ဆစ် ဖွင့်ပါမယ်။ ဂိုဏ်းတူဆိုတာ အလုပ်ဌာနချင်းတူလို့ပါ။ ရန်သူဆိုတာက ဌာနချင်း တူပေမယ့် အလုပ်သဘာဝအရ ရန်သူတွေ ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ရန်သူတွေ ဖြစ်ခွင့် မရလိုက်ပါဘူး။ သူနဲ့ ကျွန်တော်က မီးဝင် မီးထွက်ပါ။ ဒါကြောင့် အလုပ်မှာ မဆုံဖြစ်လိုက်ပါဘူး။
မေကဆုန် ရေးခိုင်းတာက ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့ကပါ။ ကျွန်တော် ရေးတာက အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့ပါ။ အချိန်တွေများ ကုန်သွားတာ မြန်သလိုလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် တချို့ကိစ္စတွေမှာ အချိန်တွေက မကုန်နိုင်ပြန်ဘူး။ ဥပမာ... စောင့်ရတဲ့ အချိန်တွေပေါ့။ ငယ်ဘ၀ကို သတိရစေတဲ့ ဟင်းတွေဆိုတော့ ငယ်ဘ၀ကို ပြန်စောင်းငှဲ့ လှည့်ကြည့်မိတယ်။ အခုတော့လည်း ငယ်ဘ၀ဆိုတာ ဘယ်လို ကုန်သွားမှန်း မသိလိုက်ဘူး။ အစားအစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ငယ်ဘ၀ကနေ အခုချိန်ထိ ဟင်းချေးများတာပဲ။ မပြောင်းလဲတဲ့ အကြောင်းတရားပေါ့။
ဟင်းချေးများတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် စီစဉ်ပေးရတဲ့ မာမားတစ်ယောက် ခေါင်းခြောက်မှာ အမှန်ပါပဲ။ မစားတဲ့ ရှောင်တဲ့ အသားတွေ ရှိသလို မကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေလည်း အများသား။ အရိုးများသလို ချေးလည်း ခါးပါတယ်။ လူကသာ တရုတ်... ကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေက မြန်မာဟင်း ကုလားဟင်း။ ခက်တာက မာမားက အဲဒါမျိုးတွေကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ မချက်တတ်ဘူး။ တနေ့လာလည်း တရုတ်ဟင်း၊ နောက်တနေ့လည်း တရုတ်ဟင်း။ တရုတ်က တရုတ်ဟင်း မကြိုက်တာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ သိလောက်ပါပြီနော်။
ပထမဆုံး သတိရတဲ့ဟင်းက ငံပြာရည်ချက် ငါးပိချက်ပေါ့။ မြန်မာဟင်းထဲမှာ ငံပြာရည်ချက်၊ ငါးပိချက်ကို ကြိုက်တယ်။ အိမ်မှာက အစပ်လျှော့ စားတော့ မြန်မာလက်ရာ ငါးပိချက်တွေလို မစပ်ဘူး။ မြန်မာပုံစံပဲ စားချင်တယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော့်အတွက် သီးသန့်ဆိုပြီး စပ်စပ်လေး ချက်ရတယ်။ တခြားဟင်းတွေ မပါလည်း ငါးပိချက်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ထမင်းစားဝင်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အလှူမှာလည်း တခြားဟင်းတွေကို မနှိုက်ပဲ ငါးပိချက်နဲ့ သခွါးသီးပဲ စားနေလို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ကြရှာတယ်။ အလှူရှင် စိတ်မကောင်း မဖြစ်ရအောင် အားနာပါးနာနဲ့ ကြက်သားဟင်း ၀က်သားဟင်း ယူစားမယ် မထင်ပါနဲ့။ ထမင်းဝိုင်းမှာ ငါးပိချက်ရှိနေရင် တခြားဟင်းတွေ မျက်နှာငယ်ရတာ အသေအချာပါပဲ။
ငယ်ငယ်တုန်းက လူကောင်ထွားအောင် ဆိုပြီး ပဲစားရတယ်။ ဆယ်တန်း ဖြေပြီးတော့ ပဲကို ရေစိမ်ပြီးတောင် စားဖြစ်တယ်။ အိမ်မှာလည်း ပဲဟင်း ခဏ ခဏ ချက်တယ်။ ကုလားပဲဟင်း ချက်တယ်။ ပဲပြုတ်ကြော်တယ်။ ပဲကတ္တီပါပြုတ် သုပ်စားတယ်။ ပဲနီလေး ဟင်းရည်ချက်တယ်။ ပဲကြီးနှပ်တယ်။ ပဲစားပေမယ့် လူကောင်က ဗေလုဝနဲ့ နင်လား ငါလား မတိမ်းမယိမ်းပဲ။ အဲဒီပဲမျိုးစုံထဲမှာ ပဲကြီးနှပ်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ဆူးပုတ်ရွက်လေး အုပ်ထားတဲ့ ပဲကြီးနှပ်က စားလို့ အတော်ကောင်းလွန်းတယ်။ ပဲကြီးနှပ်က ပဲကြီးနဲ့ နှပ်တာကို ကြိုက်သလို ထောပတ်ပဲနဲ့ နှပ်တာလည်း ကြိုက်တယ်။ ကုလားပြည်မှာ နေခဲ့တုန်းက ပဲဟင်းမျိုးစုံ နေ့တိုင်း စားခဲ့ရလို့ ကုလားပြည်ကို လွမ်းရင် ပဲကိုလည်း လွမ်းတယ်။ ပဲစားလို့လား မသိဘူး တစ်ယောက်သောသူကို ရင်ထဲက အသည်းစကားတွေ ပြောချင်မိပြန်တယ်။
ကိုးတန်းဖြေပြီး ဆယ်တန်းမတက်ခင် ပုဂံမှာ တစ်လနီးပါးနေတော့ ထမင်းဆိုင်မှာ ဟင်းတွေ အစုံအလင် ချပေးလည်း နှိုက်တဲ့ဟင်းခွက်က တစ်မျိုးတည်း။ အဲဒါက ပုန်းရည်ကြီးသုပ်။ တစ်လနီးပါး ပုန်းရည်ကြီးသုပ် တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ထမင်းစားလို့ ထမင်းဆိုင်ကတောင် အံ့သြတယ်။ အိမ်မှာတော့ ကျွန်တော် ဟင်းချေးများတဲ့ နေ့ဆိုရင် မာမားက ပုန်းရည်ကြီး သုပ်ပေးတယ်။ ကြက်သွန်နီကို အညှီနံ့ပျောက်အောင် ရေကြာကြာစိမ်ပြီးမှ သုပ်တော့ စားရတာ အဆင်ပြေတယ်။ ပုန်းရည်ကြီးနဲ့ဆို ထမင်းစားမြိန်တယ်။ အနည်းဆုံး နှစ်ပန်းကန်ပဲ။
ငယ်ဘ၀ကို သတိရစေတဲ့ ဟင်းတွေကတော့ ဒီလောက်လေးပါပဲ။ သူများတကာတွေလို ချက်မစားတတ်တော့ အဲဒီဟင်းတွေကို သတိရပြီး စားချင်စိတ်ရှိလည်း ချက်မစားဖြစ်ပါဘူး။ ပုန်းရည်ကြီးသုပ်ကတော့ ကြက်သွန် အခွံနွှာတတ်ပေမယ့် ကြက်သွန် မလှီးတတ်လို့ ဓါးထိမှာ ကြောက်ပြီး မစားဖြစ်ပြန်ဘူး။ မတတ်ရင် တတ်အောင် သင်ပေါ့လို့ စေတနာနဲ့ ပြောကြမှာကိုလည်း မြင်ယောင်မိပါတယ်။ အိမ်ရှင်မ မရှိသေးတဲ့ အခုလောလောဆယ် ဘ၀အနေနဲ့ ကျွန်တော့်အိမ်မှာ မီးဖိုချောင်ဆိုတာ မရှိလည်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by JulyDream at 11:41 PM 18 comments:
အလှဆိုတာ ကြည့်တဲ့အချိန်နဲ့လည်း သက်ဆိုင်တယ်။
Posted by JulyDream at 11:25 PM9comments:
ဖြတ်သွားဖြတ်လာ မှန်သမျှကို သွေးလှူဖို့ စည်းရုံးတိုက်တွန်းတယ်...
သွေးလှူရှင်တွေ အပူချိန်တိုင်းပြီးတဲ့နောက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ တောင်းတယ်...
ကျန်းမာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကိုလည်း ဖြေရသေးတယ်...
အားလုံးအိုခေတယ်ဆိုရင် ကုတင်ပေါ်တက် သွေးလှူကြတာပေါ့...
သွေးလှူပြီးရင် ၁၀ မိနစ်လောက် ခဏနားပြီး ဧည့်ခံထားတာတွေ သုံးဆောင်ကြအုံး...
Posted by JulyDream at 9:37 PM 12 comments:
ကိုယ်က ကျားဆိုရင် သူက ဆင်လား
ဘီလူးနဲ့မျောက် တောင်ပေါ်မှာ တွေ့ကြမယ်
မင်းသားခေါင်း ဆောင်းထားတဲ့ ဘီလူးနဲ့
မှတ်ချက်။ ဓါတ်ပုံက Esplanade ကိုသွားတဲ့ မြေအောက်လမ်းမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ခုပုံပါ။
Posted by JulyDream at 12:40 PM 19 comments:
Posted by JulyDream at 11:51 PM 14 comments:
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေညဦးပိုင်းမှာ ငရုတ်သီးဂဏန်းချက် သွားစားတယ်။ စင်္ကာပူကျွန်းပေါ်က လက်ရာကောင်းတဲ့ စားသောက်ဆိုင်မှာပေါ့။ နေရာက မိန်းမချောလေးတွေ ပေါတဲ့နေရာ။ ဆိုင်က ဆိုင်းဘုတ်တောင် မရှိရှာဘူး။ လက်ရာကောင်းသလို ဈေးလည်းကြီးတယ်။ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၁၀၀ လောက်တော့ ကုန်လိမ့်မယ်။ မာမီနဲ့ ဒယ်ဒီကို စလုံးကျွန်း အလည်တခေါက် ခေါ်တဲ့အခါ အဲဒီဆိုင်မှာ ကျွေးအုံးမယ်။ စာမေးပွဲ ဖြေခါနီးလို့ အွန်လိုင်း မလာနိုင်ရှာတဲ့ ချစ်သူလေးကိုလည်း အလွမ်းစိတ်အခံလေးနဲ့ သတိတရရှိမိတယ်။ အစားအသောက်ကောင်း စားတဲ့အချိန်ဆို ချစ်တဲ့သူတွေကို သတိရတတ်တာ မဆန်းဘူးလေ။
အဲဒီနေ့က သိပ်မစားနိုင်ပါဘူး။ တို့ကနန်း ဆိတ်ကနန်းပါပဲ။ အခုတလော အစားအသောက်တွေ မ၀င်ဘူး။ ၀ိတ်လျှော့နေတာကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှုများနေလို့ပဲ နေမှာပါ။ စိတ်ဖိစီးတာက အတိုက်အခိုက်တွေ များလွန်းလို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ အတိုက်အခိုက်ဆိုတာ ဘေးနားမှာလည်း ရှိနေတတ်တာပဲ။ အဲဒီလောက်က ဂဏန်းစားသလိုမျိုး လက်မပေ လက်မ၀င်ဘူး။ ကလေးကစားသလို အေးဆေးပါ။ တကယ်ကတော့ ရုံးမှာ တာဝန်ကြီးကြီးတွေ ထမ်းနေရလို့။ လူကြီးက စိတ်ချယုံကြည်လို့ပဲလား အရည်အချင်းကို စမ်းချင်လို့ပဲလား။ ဘာမှန်းတော့ သေချာ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် တာဝန်ပေးတယ် ဆိုတော့လည်း ယူရတာပေါ့ဗျာ။
Posted by JulyDream at 7:59 PM 21 comments:
Posted by JulyDream at 12:58 AM 25 comments:
Posted by JulyDream at 1:40 AM 17 comments:
သွေးသည် အနိစ္စာ၊ ငါ့ခန္ဓာတည်း ... ။
အဲဒီကဗျာကို ပုဂံခေတ် နရပတိစည်သူမင်း လက်ထက်တုန်းက အနန္တသူရိယ အမတ်ကြီး ရေးသားခဲ့တယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ ကဗျာက မှန်နန်းရာဇ၀င်ကြီး ပထမတွဲမှာ ပါပါတယ်။
နရပတိစည်သူမင်းက မြန်မာသက္ကရာဇ် ၅၃၆ ခုနှစ်မှာ သူ့နောင်တော် ဘုရင်မင်းယဉ်နရသိင်္ခကို လုပ်ကြံပြီး နန်းတက်တယ်။ မင်းယဉ်နရသိင်္ခက နရပတိစည်သူရဲ့ မိဖုရား ဝေဠုဝတီကို အတင်းအဓမ္မ သိမ်းယူခဲ့ဖူးတယ်။ နရပတိ နန်းတက်တော့ သူ့နောင်တော်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့သူတွေထဲက မကျေနပ်တဲ့သူတွေကို ကွပ်မျက်တယ်။ အနန္တသူရိယအမတ်ကြီးက မင်းယဉ်နရသိင်္ခရဲ့ အထိန်းတော်သားပါ။ သူ့ကိုလည်း ဘုရင်က အမျက်တော်ရှလို့ ကွပ်မျက်ဖို့ အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။
လူသတ်ကုန်းမှာ မကွပ်မျက်ခင် အမတ်ကြီးက သူတည်းတယောက်... အစချီတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် ရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကဗျာရေးပြီးတော့ အမတ်ကြီး ကွပ်မျက်ခံရပါတယ်။ ကွပ်မျက်ခံပြီးမှ ဘုရင်ကို ကဗျာဆက်သလေတော့ ဘုရင်က ဖတ်ပြီးတဲ့နောက် အမျက်ပြေသွားလို့ မသတ်ဖို့တားပါတယ်။ ဒါပေမယ် မမီတော့ဘူး။ အမတ်ကြီးကို သတ်ပြီးနေပြီလေ။ ဒါကြောင့် မျက်ဖြေလင်္ကာလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
အဲဒီ မျက်ဖြေလင်္ကာထဲမှာ သူတည်းတယောက်၊ ကောင်းဖို့ရောက်မူ... သူတယောက်မှာ၊ ပျက်လင့်ကာသာ ဓမ္မတာတည်း... ဆိုတဲ့ စာသား... ခဏတက်သည့် ရေပွက်ပမာ ဆိုတဲ့ စာသား... တုံ့မယူလို ဆိုတဲ့ စာသား အဲဒီသုံးခုကို နှစ်ခြိုက်မိပါတယ်။ တုံ့မယူလို ဆိုတာလေးက ပြောရတာ အလွန်လွယ်ပါတယ်။ လုပ်ဖို့ကတော့ အတော်ခက်ပါတယ်။ သေခါနီးအချိန်မှာတောင် တုံ့မယူလိုတဲ့ အမတ်ကြီးကို လေးစားမိတာ အမှန်ပါပဲ။ သူ့လို လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်သေးပါဘူး။
ကဗျာအပြည့်အစုံနဲ့ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကို ပြောပြပေးတဲ့ အစ်မမေဓာဝီကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း တပါတည်း ပြောလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။
Posted by JulyDream at 12:12 AM 21 comments:
Labels: Emotions, Photo, Poems
မလေးရှား မလက္ကာကို အလည်တခေါက်သွားတုန်းက ဆိတ်ခြံထဲ ရောက်သွားတယ်။ ဆိတ်ခြံထဲမှာ ဆိတ်မတွေ အများကြီးပဲ။ နို့ထွက်ပစ္စည်း ရောင်းဖို့အဓိကဆိုတော့ ဆိတ်မတွေ များတာ မဆန်းလှပါဘူး။ ဆိတ်မတွေရယ် ဆိတ်ကလေးတွေရယ် အခန်းလေးတွေ ခွဲကန့်ပြီး ထားထားတယ်။ ဆိတ်ပေါက်စနလေးတွေ အရမ်းငယ်ရင် ဆိတ်အမေနဲ့ တွဲထားတယ်။ နည်းနည်းကြီးတဲ့အရွယ်ဆို နို့ခွဲထားပြီး တခြားခြံမှာ အကုန်စုထည့်ထားတယ်။
အဲဒီမှာ ဆန်းတာက ဆိတ်ထီးကြီးက တစ်ကောင်တည်း။ ဆိတ်သိုးကြီးလို့ပဲ ပြောရမယ် ထင်တယ်။ တကယ့်ကို အကြီးကြီးပဲ။ ခန္ဓာကိုယ် ထွားကြိုင်းတယ်။ အရိုးအဆစ် သန်မာတယ်။ ဆိတ်သိုးကြီးကို တစ်ကောင်တည်း ခြံခတ်ထားတယ်။ မျိုးသန့် ဆိတ်မတွေကို လှမ်းမြင်နေရပြီး မကြင်ရတဲ့ ဆိတ်သိုးကြီးခမျာ မုန်ယိုနေသလားပဲ။ စည်းတစ်ဘက် ခြားသလိုပေါ့။ ခြံစည်းရိုးပေါ် ပတပ်ရပ်ပြီး ဆိတ်မတွေကို လှမ်းမျှော်လိုက်... ခြံထဲမှာ ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်လိုက်။ နှာတွေကလည်း မှုတ်နေသေးတယ်။ အော်ကလည်း အော်သေးတယ်။ ဆိတ်ဘာသာစကားနဲ့ ဆဲနေတာလား မသိဘူး။
ဆိတ်မတွေနဲ့ ဆိတ်လေးတွေကို လူတွေက အစာကျွေးတော့ သူက မကြိုက်ဘူး ထင်တယ်။ ဆိတ်မတွေကို လူတွေက ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်လည်း မကြိုက်ပြန်ရှာဘူး။ အဲဒီဘက်ကို မျက်ထောင့်နီကြီးနဲ့ လှမ်းကြည့်တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ဓါတ်ပုံ လာရိုက်ရင်တော့ သဘောကျပုံပဲ။ သူ့ကို အရေးတယူ ဆက်ဆံရင်တော့ ပျော်ပုံပဲ။ ကြည့်ရတာ... သူ့ရဲ့ အခြွေအရံ အပေါင်းအသင်းတွေကို ဘယ်သူမှ လာမထိနဲ့။ လာ မဆက်နွယ်နဲ့။ လာ မပတ်သက်နဲ့။ အဲဒါကို သူပဲ ပိုင်တယ်... သူပဲ ဆိုင်တယ်လို့များ အထင်တော် ရောက်နေသလားပဲ။
ဆိတ်သိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင် အထူးသတိထားမိတာ ဂွေးစေ့ပဲ။ ဆိတ်ဂွေးစေ့က တကယ့်ကို နံမယ်ကြီးတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ စိတ်မမှန်တဲ့ သာကူးတွေကို ဆိတ်ဂွေးစေ့ပဲလို့ အမည်ပေးဖူးတယ်။ ဟိုအဖွဲ့မှာလည်း ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့မှာလည်း ပါတယ်။ စားစရာရှိတဲ့ ပွဲဆို ကျော့ကျော့လေး ရှိုးအပြည့်နဲ့ ပွဲတက်တယ်။ လုပ်စရာရှိတဲ့ပွဲဆို တခြားအဖွဲ့က အရေးတကြီး ကိစ္စရှိတယ် အကြောင်းပြပြီး ခေါင်းရှောင်တယ်။ အခွင့်အရေးသာ ရမယ်ဆိုရင် ဟိုးပြေးကပ် ဒီပြေးကပ်ပေါ့။
အသေအချာ အချိန်ပေးကြည့်မိရင် ဆိတ်ဂွေးစေ့က ဟိုဘက်ရမ်းလိုက် ဒီဘက်ရမ်းလိုက်ပဲ။ ဟိုဘက်ကပ်လိုက် ဒီဘက်ကပ်လိုက်ပဲ။ ဒါကြောင့် စိတ်နေစိတ်ထား မမှန်တဲ့သူတွေကို ဆိတ်ဂွေးစေ့လို့ ခေါ်တာ မှန်သလိုလိုပဲ။ မိန်းမလိုလို ယောကျာ်းလိုလို ကောင်တွေလည်း ဆိတ်ဂွေးစေ့ပဲဖြစ်မယ်။ ယောကျာ်းဖြစ်ပြီး မိန်းမလို မိန်းမရ လက်သီးပုံးပြနေတဲ့ မဟာသတ္တိရှင် ပညာတတ်ကြီးတွေပေါ့။ သတင်းစာတွေမှာ ဆောင်းပါးရေးနေတဲ့သူတွေလို ပလီပလာ လန်ကြုပ်ဇာတ်လမ်းတွေ ရှေ့နောက်မညီ ရေးတတ်တဲ့ ကောင်တွေလည်း ဆိတ်ဂွေးစေ့စာရင်းထဲမှာ ထည့်ထားရမယ်။
စဉ်းစားမိတာက မုန်ယိုနေတဲ့ ဆိတ်သိုးတစ်ကောင်အကြောင်းပါ။ ရေးမိရင်း ရောက်သွားတာက ဆိတ်ဂွေးစေ့ ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီတော့ ခေါင်းစဉ်တောင် ပြောင်းရမလားလို့ တွေးမိတယ်။ အပျိုအအိုတွေ အမြင်မတော်ရင် ကျော်သွားဖတ်ကြပါဗျာလို့ အနူးအညွှတ် တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။
ဆိတ်သိုးကို Buck လို့ ခေါ်ကြောင်း ပြောပြတဲ့ ရွှန်းမီနဲ့ မုန်ယိုတာကို Musth လို့ သုံးရကြောင်း ပြောပြတဲ့ စင်ဒန်လားကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က အင်္ဂလိပ်လို ညံ့ပါတယ် ဆိုတာ ၀န်ခံပါတယ်။
Posted by JulyDream at 12:12 PM 26 comments:
Labels: Emotions, Photo, Straw
1. What is your name : July
2. A four Letter Word : Just
4. A girl's Name : Jennifer
7. Something you'll wear : Jacket
8. A food : Jalebi (Indian fried sweet)
9. Something found in the bathroom : Jelly
11. A reason for being late : Jogging
12. Something you'd shout : Jump
13. A movie title : Jungle Book
15. A musical group : Jet (Rock Band)
17. A street name : Joe Phyu Street (Minglar Taung Nyunt)
18. A type of car : Jeep
19. The title ofasong : Justadream
20. A verb : Joke
Facebook ထဲမှာ ကိုပီတိက အဲဒါလေးကို ရေးဖို့ လက်ဆင့်ကမ်းပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ မမိုးချိုသင်းက ရေးခိုင်းတာပါ။ ညကျတော့ ပင့်ဂိုးလ်က ရေးခိုင်းပြန်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း ရေးရပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး လက်ဆင့်ကမ်းထားတဲ့ ဘလော့ဂါတွေကတော့
Posted by JulyDream at 1:52 AM 8 comments:
Posted by JulyDream at 11:44 PM 13 comments:
နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာ အောင်ပွဲခံတဲ့ အပြုံးတွေနဲ့
ကင်မရာ မီးရောင်အောက်မှာ ခေါင်းမော့ထားကြမယ်။
Posted by JulyDream at 11:50 PM 18 comments:
ဒီနေ့က သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ပါ။ တရုတ်လိုလည်း လပြည့်နေ့ပါပဲ။ လမုန့်ပွဲတော် ကျင်းပတဲ့နေ့ပေါ့။ ဒီနေ့မှာ Youth Donor Club က ဦးစီးကျင်းပတဲ့ Youth Favourites 2009 ကို လုပ်အားပေး သွားရင်း ဓါတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်ပွဲမှာ ပါဝင်တဲ့ လုပ်အားပေးဦးရေက ရှေ့နှစ်ကလောက် မများပါဘူး။ ဒီတော့ လူနည်းနည်းနဲ့ ကျဲကျဲဝိုင်းခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ရည်မှန်းထားတဲ့ သွေးအိတ် ၂၀၀ ထက် ကျော်လွန်ပြီး သွေးအိတ်ပေါင်း ၂၀၈ အိတ် စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပင်ပန်းရကျိုးနပ်တဲ့အတွက် ကျေနပ်မိပါတယ်။
ဟိုနားဒီနား နေရာတကာမှာ ပိုစတာ...
ပါပါး အပ်ဖောက်တာ နာလားဟင်...
ဟိုလုပ် ဒီလုပ် တနေကုန် အလုပ်ရှုပ်...
သွေးလှူဖို့အရေး အိုး... ဒီက စောင့်နေသူ...
Milestone:6Months Old
Posted by JulyDream at 11:18 PM 13 comments:
အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့ ၁၉၄၉... တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားနေ့
အခုချိန်မှာတော့ နှစ် ၆၀ တိတိ ရှိသွားပြီပေါ့။ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ နှစ် ၆၀ သမိုင်းစာမျက်နှာမှာ ရက်စက်မှုတွေ ရူးမိုက်မှုတွေနဲ့ အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်တာတွေ ရှိခဲ့သလို အောင်မြင်မှု သရဖူတွေ ဆွတ်ခူးခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၃ မှာ အာကာသထဲကို လူလိုက်ပါနိုင်တဲ့ အာကာသယာဉ် လွှတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာမှာ အမေရိကန်နဲ့ ဆိုဗီယက်ပြီးရင် အာကာသထဲကို လူလွှတ်နိုင်တဲ့ တတိယမြောက် နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ အိုလံပစ်ပွဲကို အောင်မြင်စွာ လက်ခံ ကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
နှစ် ၆၀ အတွင်းမှာ ဘာတွေ ပြောင်းလဲသွားသလဲ ဆိုတာလေး ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
၁၉၄၉ မှာ ပျဉ်းမျှ လူ့သက်တမ်းက ၃၅ နှစ် - ၂၀၀၈ မှာ ၇၃ နှစ်
၁၉၄၉ မှာ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းက ၂၀% -၂၀၀၈ မှာ ၉၃%
၁၉၅၂ မှာ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေက ၁၁၉ ယွမ် - ၂၀၀၈ မှာ ၂၂၆၉၈ ယွမ်
၁၉၅၉ မှာ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အားကစားသမားက ၁ ဦး - ၂၀၀၈ မှာ ၁၂၀ ဦး
တကယ်ချစ်ရဲ့လားဆိုတာ အချိန်က စကားပြောသွားပါပြီ။ သူတို့နိုင်ငံကို သူတို့ တကယ်ချစ်ပါတယ် ဆိုတာကို အလုပ်နဲ့ သက်သေပြသွားပါပြီ။ အားကျသင့်တာတွေကို အားကျပါ။ အတုယူသင့်တာကို အတုယူကြပါ။
အသီးအပွင့်တွေအတွက် ပီတိဖြာနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး
လေတပ်မတော်ကလည်း ဝေဟင်ထက်မှာ အလှပြ ပျံသန်း
ရေတပ်မတော် ဂုဏ်ပြုတပ်ခွဲ ချီတက်အလေးပြု
နျူကလီးယား ဒုံးပျံတင် စစ်ကားတွေလည်း ချီတက်
Posted by JulyDream at 8:41 PM 10 comments: